Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): November 2013
at 11/30/2013 07:35:00 PM
၄င်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကချင်ဒီမိုကရေတစ်ပါတီအဖွဲ့ဝင် ၁ ဦးဖြစ်သူ ဆလန်ဇော်ဘန် (Salang Zau Ban) အား ယနေ့ နံနက် အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အတွင်းရေးမှူးကိုယ်စား ဇေယျာဇော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ပေးပို့သော ၎င်းပါတီနှင့် ပတ်သက်သောအချက် (၄) ချက်ကို မြစ်ကြီးနားတွင် လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု ဦးဂွမ်ဂရောင် အောင်ခမ်း KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ကချင်ဒီမိုကရေတစ်ပါတီ “ကချင်ပြည်သူလူထုအတွက် ခိုင်မာစွာရပ်တည်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ကချင်ပြည်သူလူထုများ၏ အကျိုးနှင့် ကချင်ပြည်သူလူထုနှင့် အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည့်ပါတီ ဖြစ်ကြောင်း” အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးဂွမ်ဂရောင်အောင်ခမ်း ကပြောသည်။
ပါတီရရှိသောကြောင့် ၀မ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ၂၀၁၄ ဇွန်လနောက်ပိုင်းမှ စည်းရုံးရေးများပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။
ယခုလအတွင်း ပါတီ ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ပါတီ အမှတ်တံဆိပ် များကိုပြုလုပ်ကာ ၁ လအတွင်း ပါတီခေါင်ဆောင်နှင့် ဒုအတွင်းရေးမှူး နေပြည်တော်တို့ပြန်လည် တင်ပြလျှောက်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ဒီမိုကရေတစ်ပါတီ (Kachin Democratic Party) မှ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ရရန် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် ၂၀၁၃ တွင် နေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ယနေ့ မှတ်ပုံတင် ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှ လူထုကိုယ်စား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော ပါတီများအနည်းအကျဉ်းသာဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်အတွင်းမူ ၃ ပါတီအထက် ကချင်လူထုများထဲမှ ပါတီဖွဲ့စည်းကာ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အသီးသီးချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 11/30/2013 11:11:00 AM
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ ရမှ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်မယ်
at 11/29/2013 10:15:00 PM
Post by Jade Land.
at 11/28/2013 02:55:00 AM
Bai du wa na bat December praw kaw nna Jinghpaw ni Yangung mare hpe htim kaput kau na matu jin jin hkyen nga masai. Jinghpaw niaprat rai mat sai ngu ai hpe htawng madun mayu nngai. Poi nga jang Jinghpaw ni hpe kadai wa shingdang da lu na n rai nga ai.
Yangung myu ting Jinghpaw ni bai kaput mat na hta sha n-ga, Yagung mare ting Jinghpaw ni la sa ai gumhpraw ni hkrai kahpoi mat na re, "N kam taw gaw, tinang jai kau na gumhpraw hpe Nhtu ginchyai X mahkret shakap" nna jai dat u nang bai mu mada lu na ra ai.
Read more+++click on
at 11/28/2013 02:53:00 AM
မိဘပြည်သူများက သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အနည်းငယ် အသိအမှတ်ပြုနေခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်အကောက်မလွဲကြဖို့ လိုတယ်။ ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကို ထောက်ခံလို့ မဟုတ်၊ ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း အစိုးရကို ထောက်ခံလို့လည်း မဟုတ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်နေတယ်၊ ၂၀၀၈-ခုဥပဒေကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးဖွယ်ရှိတယ်၊ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ရှာပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး ဝန်းရံကြခြင်းဖြစ်တယ်။
လာမဲ့နှစ်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ တစ်ခုခုကို လုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်၊ ဦးပိုင်၊ ခရိုနီ၊ တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေမြဲဆိုရင်၊ ၂၀၀၈-ခုဖွဲ့စည်းပုံကို ဒီတစ်ခါမှာလည်း မိမိအလိုကျ ပြင်ဆင်ချင်တဲ့နေရာမှာပဲ ပြင်ခဲ့ရင် လူထုတိုက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိတယ်။
at 11/28/2013 02:39:00 AM
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံရဲ့ သြဇာအောက်ကို ရောက်သွားတာနဲ့ ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်မှုဟာ အဲဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတော့တယ်။
အခု ယူကရိန်းကို ကြည့်ရင် ပိုပြီး သိသာပါတယ်။ ယူကရိန်းဟာ အကြီးဆုံးဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုပါ။ ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာ ရုရှားပြီးရင် ဥရောပမှာ အကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကနေ ခွဲထွက်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ ရုရှားလောင်းရိပ်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပါ။
လောလောဆယ်မှာ အီးယူနဲ့ ကုန်သွယ်ဖို့တောင် ရုရှားသဘောတူညီချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ သဘောပါ။ အီးယူနဲ့ ရုရှားတို့ ဆွေးနွေးပြီး အပေးအယူတည့်မှ ယူကရိန်းက ဥရောပဘုံဈေးကို ဝင်ရောက်နိုင်မဲ့သဘောပါ။ ဒါဟာ ဘာကို ပြနေသလဲဆိုရင် လွတ်လပ်ရေးရတိုင်းလည်း မလွတ်လပ်ကြဘူးဆိုတာပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ကြည့်ရင်လည်း အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ အင်ဒိုပြီးရင် အကြီးဆုံးပါ။ အင်္ဂလိပ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပေမဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုအချိန်မှာ တရုတ်သဘောမတူရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ယူကရိန်းမှာ ရုရှားမွေးထားတဲ့ အစိုးရ ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တရုတ်မွေးထားတဲ့ အစိုးရ ရှိပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က ကချင်၊ ပလောင်၊ ရှမ်းတို့ကို တိုက်ခိုက်နေခြင်း၊ မုံရွာမှာ မြန်မာ့ရဲတွေက ဒေသခံများကို ဖိနှိပ်နေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူတို့မသိရှိဘဲ တရုတ်နဲ့ သဘောတူထားတဲ့ စီမံကိန်းကြီးများ အများအပြားရှိနေခြင်းတို့ကို ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာကို တရုတ်က ဘယ်လောက်အထိ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီလဲဆိုတာကို သိရမှာဖြစ်တယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာနဲ့ နယ်နိမိတ်ကို ထည့်သွင်းမဆွေးနွေးဖို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော သူ့အစိုးရကိုယ်နှိုက်က အဲဒီအချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းမထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
at 11/25/2013 10:16:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး နှင့် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ထူထောင်ရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ ဒီကိစ္စပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ စိတ်ဝမ်းကွဲတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အားလုံးလိုလားတာက စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုပဲ။ အဲဒီ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဒီပုံစံနဲ့ တော့ မရဘူးဆိုတာ ကျမတို့ အားလုံး လုံးဝ သဘောတူတယ်။ အားလုံးအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် လုပ်ရမယ်။ အားလုံးလက်တွဲလုပ်မှ အန်တီတို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာမှာ။ တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အန်တီအနေနဲ့ အမြဲတန်းဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ´´ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
bY:Burmar Pyi Thar
ဘယ်လို လုပ် ရင်ချမ်းသာ မှာ လည်း...........ရှင်းရှင်း ပြောစမ်းပါ...
ချမ်းသာမယ်ဆို မာရှယ်လောအောက် နေရနေရ
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်တဝှမ်း ဘင်္ဂလီလွှမ်းပြီး
နှစ်ပေါင်း၆၀ အလုပ်မှ မဖြစ်တာပဲ။
လူ့တန်ဘိုး လူ့သိက္ခာကို ပြန်ပေးတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ လူတွေဟာ … တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်
အမိန့်ရဲ့ဓားစက်အောက်က ခွေးသွားစိတ်လေးတွေလို ဖြစ်နေတာ
ဒီမိုကရေစီကတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒသည်သာ အခရာ။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် သိက္ခာရှိရှိလေး ဆင်းရဲတာ
အဘက်ဘက်က တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အကြောင်းတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်ခဲ့ရလျက်က
အာဏာရှင်တွေလုပ်ပေးလို့ ဒီတသက် ချမ်းသာနေမယ်ဆို
ဘယ်လို နေရ မလဲ... ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့် ပါ....
Thanks For Sending Thorn Nay Soe
at 11/25/2013 01:14:00 PM
Ningmu nsan seng ai myen asuya hte simsa lam jawm tam ai gaw ningsin kata kaw wa hkawm hkawm nna nyau chyang hpe jawm tam abram masawp hkawm ai hte bung wa nga ai. Nyau hpe mung nmu, shada da mung nmu hkat re majaw lahtan shada ahkawk hkat ai lang law wa jang gaw gamu anut hkat ra ai madang de du wa chyalu sha re.
Tsun mayu ai lachyum gaw Anhte myit mada ai Federalantsaemyen asuya nianingmu nsan seng ai. Myen asuya ni hku nna mungdan ting gap hkat jahkring lu na matu Rawt Malan hpung ni hpe tang madun ai Frame Work gaw Federal de lahkam mayu ai Frame work nre. Rawt Malan hpung ni hpe gau ngwi ngwi ginchyum dat shamyit kau mayu ai Die Walk she re.
Dai majaw myen asuya hte mahtai nlu ai hkrum jahta lam lang nau law wa jang gaw Anhte npawt mayu tim shanhte myen ni pawt mayu wa chyalu sha re. Shanhte myen asuya ni jahkrat tawn ya ai Frame Work (Die Walk) hpe Anhte nhkap la hkraw ai majaw Anhte hpe a-gajawng sha htim gamu wa jang grau yak wa na re.
Myen asuya hte hkrum jahta ai lam lang shalaw na malai Laknak lang Rawt Malan taw nga ai myu bawsang ni yawng jawm pawng ai n-gun kaba wuhpung byin na matu dai hpe shawng shakut ra sai.
Ningsin htawng kata kaw rawng nga ai myen asuya gaw ningmu nsan seng ai re majaw gade lang hkrum jahta tim simsa lam mahtai mu mada wa na malai nhtang de madaw gwi lagut daru rai mara tam wa na masa nga ai. Grau nna Anhte KIO/KIA ni hpe grai n ju taw nga ai ten mung re. Thein Seinamaw lanyet masing rai nga ai mungdan ting gap hkat jahkring masing nmai awngdang hkraw ai majaw KIO/KIA hpe hpyen kaba madung hku nan masat kau sai ten mung rai nga ai. Maga mi de mungmasa jahta ga ngu tsun masu nna maga mi de gaw majan kabaamatu ahkyak ai shara ni hta hpyen man shajin tawn lu htim ganaw gasat taw nga ai rai nga ai.
Dai majaw Anhte hku nna dawdan shajin tawn ra ai gaw..
(1) Laknak lang Rawt Malan nga Myu Bawsang ni jawm pawng nna n-gun kaba ai Wuhpung langai byin hkra shawng shakut ra sai.
(2) Anhte myit mada ai Federal Munghpawm hkrang hpe shawng ka shajin mat wa na.
(3) Dai Federal Munghpawm hkrang hpe myen asuya hku nna myit hkrum jang she mungdan ting gap hkat jahkring sign htu lu na.
(4) Dai Federal Munghpawm hkrang hpe myen asuya hku nna nhkap la jang gaw myen nlawm ai lak san federal Munghpawm hpe gawgap mat wa sana re lam hpe mungkan de ndau shabra nna jawm shakut mat wa ra sai.
Daini na democracy mungkan gaw ga shadawn hku tsun ga nga yang myit nhkrum ai Num kasha langai hpe n-gun hte dip hkung ran la na hkum tsun, n-gun hte shinggyim roirip pyi nmai ai ten re. Tsun mayu ai lachyum gaw.. Anhte hpe ndai daram dip gamyet dang sha, sat nat, zing ri zing rat re ai myen amyu asuya hte naw jawm nga na matu hpyi aput taw nga ai gaw mana bungli she rai sai.
Dai majaw ningsin kata kaw myen asuya hte nyau chyang jawm tam nga na malai ninghtoi de gale pru mat ai gaw hta ni hta na ngwi pyaw lam rai na re. Myen asuya hte sha jawm nga dingsa gaw hkik hkam ai amyu nmai byin ai. Karai Kasang gaw Annau ni hpe hkik hkam ai amyu byin shangun mayu ai re. Dai majaw laga amyu kaji ni hpe Annau ni nan woi awn ra sai.
at 11/25/2013 08:20:00 AM
ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်ကို ပြည်ထောင်စုဘိုးအေလို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူဟာ ဗမာပြည်မနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ အဓိကတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Read more comment click on
Myen mungangwi pyaw simsa lam majing lamuga sum la,Ndai sumla zawn di lu garan la ai shani she ngwi pyaw lam majing lu na zawn rai wa nga ai.
မန်ဝိန်းကြီးကျေးရွာ၊ မန်စီမြို့နယ် အား အချိန်မရွေး တိုက်ခိုက်နိုင်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
at 11/25/2013 04:08:00 AM
ထိုရွာတွင် အထင်ကရ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်း ၂ ခု၊ ကက်သလစ်အသင်းတော်
ကျောင်းဝင်း (လူဦးရေ ၁၈၀၀ နှင့်၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ကျောင်းဝင်း (လူဦးရေ ၈၀၀ ကျော်) ရှိနေပြီး ရွာအတွင်း မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် နေထိုင်သော စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်၊ ရွာခံလူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါသည်။ အနီးနားရှိ လဂတ်ယန် တွင် နမ့်လင်းပါ တိုက်ပွဲကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၁၀ ရက်အတွင်း ရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါသည်။ —
Nan Nan OMG!!!
Nan Lwin Oh My God! God bless them ;(
Zau Lawt hpa majaw?
Naw Ja If Father Luke Hka Li is still there, it is not going to happen - it is not about who will have upper hand in term of Militarily- but it is all about the safety of people (local and IDPs) ------ Plsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Nang Pu့ုhkrit chyu hkrit tsang ra ai anhte myu sha ni wa
Zau Hkum hkrit magang jahkrit magang rai ma ai..dai majaw dang lu ai daram adawt nga ai sha mai ai..teng man ai lam hpe tsun ai ,adawt ai lam gaw hpa mara nnga ai, yu bka nlu ai...shaman chyeju madaw hkam la lu na re...